Fadlan Madaxweyne kordhi wax qabadkaaga kana dhabee Balanqaad kaaga – Somali Top News
April 22, 2019 April 23, 2019 Somali Top News	0 Comments
Waa mowduuca sidii xal looga xoroobi lahaa qaraxyada, weerarrada iyo dakanada u dhexeysa Shabaab iyo Dowladda iyo shacabka oo ku dhammaaday. Waa arrinta cuuryaamineysa Dowladnimada Soomaaliya iyo horumarka dalka ee dhan kastaba.
Wuxuu ku datay “yeey u faa’iideeyeen [Shabaabku]?”
Wuxuu ku tilmaamay in uu soo dhoweynayo haddii ay suurta-gal, waa Culimmadee, ay dhexdhexaadin karaan Dowladda iyo Shabaab.
Maaddaama halista amni ee ugu weyn ay hadda ka taagan tahay Shabaab, isla markaana sida uu qiray ay Soomaali badani labada dhinacba ku dhammaadeen, waxaan qabaa in hadalka Madaxweynuhu aanuu ku dhex lumin khudbadihiisa kale.
Waxay ila tahay hadalkani uu mudan yahay in si gooni ah dhug loogu lahaado, in la taageero, qofkii awoodaana uu talo iyo gacanba ka geysto in dagaalka Shabaab lagu xalliyo hab aan ahayn xabbad iyo dayaarad xambaarsan keliya gantaallo iyo ama bambaanooyin. Ayada oo aan ognahay in weerarkaas hordhaca ama Jawaabtu ay tahay Qarax caasimadda ka dhaca oo aan dadka loo kala aabbayeelin iyo isu socodka gobollada dalka iyo xataa caasimadda dhexdeeda oo ma-jire ku negaada.
Taladeyda ugu dambeysa waxay tahay maaddaama uu Madaxweynuhu isla khudbaddaas uga cawday siyaasiyiinta qaar, uu isagu ku tilmaamay in ay geedka ka jarayaan jirridda in aan culimmada lagu koobin dhexdhexaadinta Dowladda iyo Shabaab.
← Sudan tensions escalate after talks with military break down
Somali police found stolen baby from hospital in Mogadishu →
Markay Madaxdeennu Dhageysiga Ka Doorbidaan Qoraalka Sidaan Ayaa Dhacda !!
July 18, 2018 Somali Top News 0